Dhacdo Ugub ah Oo ka dhex bilaabaneysa Qoyska B/tooyada Ingiriiska, ragga guursanaya rag kale | Afrikada
Dhacdo Ugub ah Oo ka dhex bilaabaneysa Qoyska B/tooyada Ingiriiska, ragga guursanaya rag kale
Jun 17, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Markii ugu horeysay taariikhda qoyska boqortooyada Ingiriiska ayaa waxaa nin ay ilmo adeer yihiin Boqorad Elizabeth uu guursan doonaa nin kale.
Lord Ivar Mountbatten, oo ilma adeer la ah Queen Elizabeth, ayaa mehersan doona James Coyle waxaana uu meherku ka dhici doonaa macbad ku yaal degmada Devon oo ninka la aroosayo uu deggan yahay, tani ayaa noqoneysa dhacdadii ugu horeysay ee qof reer boqor ahi uu guur noocan ah ku dhaaqaaqo.
Ivar, ayaa hore xaasle u soo noqday waxaana u jooga carruur tiro ah.
Waxa uu sheegay in arrinta uu sameynayo ay tahay Samofal uu u sameynayp nin kale, kaasi oo uu sheegay in uusan laheyn karti iyo awood badan oo ku carruur ku yeesho, sidaa darteedna ay ku heshiiyeen in uu guri geysto.
“James ma uusan helin nolosha heerka sare ah ee anigu aan ku soo naalooday” ayaa uu yiri ninka wax guursan raba.
Qoyska ayaa caado u lahaa in aroosyadooda caalamka oo dhan laga daawado laguna soo qoro wargeysyada, balse lama oga arooskani loo soo bandhigi doono sida kii Prince Harry iyo xaaskiisa Meghan oo kale ama sida arooskii amiir William iyo Kate Middleton oo kale.
READ MORE: Madaxweyne Geelle Oo Addis Ababa kula kulmay Aby Ahmed
Arrinkan ayaa saadaasha qoyskaasi su’aal cusub gelinaya maadaama falkani ugub ku yahay qoyskaasi reer boqor.